Ligy Premier anglisy (EPL) 2021/2022 mpilalao ambony indrindra - Victor Mochere
Ny Premier League (matetika antsoina hoe English Premier League (EPL) ivelan'i Angletera) no ambaratonga voalohany amin'ny rafitra ligin'ny baolina kitra anglisy. Adin'ireo klioba 20, miasa amin'ny rafitra fampiroboroboana sy fihemorana amin'ny English Football League (EFL) izy io. Ny Premier League dia orinasa iray anaovan'ireo klioban'ny mpikambana mpikambana. Ny vanim-potoana dia manomboka amin'ny Aogositra ka hatramin'ny Mey miaraka amin'ny ekipa tsirairay milalao lalao 38 (milalao ny ekipa 19 hafa na an-trano na any ivelany).
Ireto misy scorers voalohany amin'ny Premier League amin'ity vanim-potoana ity.
Fanamarihana: Ny statistika etsy ambony dia havaozina isaky ny milalao ny lalao.
Tsara indrindra avy amin'ny Justin Bieber
Mark Zuckerberg Harena Net 2022